Event Management Software(Gevme), Event Success Platform
Home/ဘာကြောင့် Event Management Software တွေကို ပိုမိုရွေးချယ် အသုံးပြုသင့်ပါသလဲ ?
Abstract blur wedding hall in hotel interior for background
ဟိုး … အရင်တုန်းက Event Planner တွေဟာ ပွဲတွေမှာ Paper နဲ့ပဲ registeration form တွေကို ဖြည့်စေတယ် ၊အသုံးပြုစေတယ် ။ ဒါဟာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ရင် အရမ်းကို နောက်ကျနေပါပြီ။
လူကြီးမင်းတို့ Event Planner တွေအနေနဲ့ ခေတ်မှီဆန်းသစ်ပြီး အသုံးပြုရ လွယ်ကူတဲ့ Event Management software တွေကို အသုံးပြုကြည့်သင့်ပါတယ် ။
Okay … လူကြီးမင်းမှာ လာမယ့်အပတ်အတွက် စီစဉ်စရာ Event တစ်ခု ရှိပါသလား ?
ဒါဆိုရင် လူကြီးမင်းရဲ့ဧည့်သည် တွေကို Event registration software(Gevme) နဲ့အလွယ်ကူဆုံး နဲ့အခမ်းနားဆုံး ဧည့်ခံလိုက်ပါခင်ဗျာ။
Event Management System က အဆင်ပြေပါတယ် ဆိုတာထက် ကို သုံးရတာ ရိုးရှင်းပါတယ် ။ Paper တွေပေါ်မှာ registeration လုပ်ရတာထက် ပိုပြီး လွယ်ကူလျှင်မြန်စေပါတယ်။
ပွဲကျင်းပမည့်ရက် မတိုင်ခင် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဧည့်သည် တွေက Event တက်ရောက်ဖို့မေ့ကောင်းမေ့နေမယ် ဆိုပါစို့၊ ဒီ Software လေးက Reminder ပေးပို့ကာ အလိုအလျှောက် သတိပေးပါလိမ့်မယ် ။
ဒီတစ်ချက်တော့ Event Planner တွေအတွက် စိတ်အေးရပါပြီ။
ဧည့်သည်တွေဟာ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ကော်ဖီဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံး Bus ကားမှာပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Internet ရသည့် နေရာတိုင်းမှာ register လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
ပြီးရင် confirmation email လေးနဲ့ အလွယ်တကူ ပွဲကို တက်ရောက်နိုင်ပါတယ် ။
Customer fields တွေထဲမှာဆိုရင် Name, Postion , Email , Age , Gender, Phone No ,Company, တွေပါတဲ့အပြင်
Survey အနေနဲ့လည်း ဧည့်သည် တွေဆီမှ ကောက်ယူနိုင်ပါတယ် ။
Event Management Software ဟာဆိုရင် ပွဲထဲမှာ ဘယ်သူတွေက ဘယ်ချိန်မှာ တက်ရောက်တယ်ဆိုတာအပြင်
ဘယ်နယောက်တက်ရောက်လဲ ဆိုတာပါ အချိန်နဲ့ အမျှ Check In လုပ်နေတဲ့အတွက် အေးအေးဆေးဆေး ကြည့်နေရုံပါပဲ။
နောက်ပြီး Event Management Software ဟာ အားသာချက်တွေများသလောက် အကုန်အကျကလည်း အလွန်သက်သာပါတယ်။ ဆိုတော့
Event Planner တွေအတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေတဲ့ Software တစ်ခုဖြစ်လို့လက်မလွှတ်တမ်း သုံးစွဲကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ….။
Email : info@global-connect-asia
By gcaadmin|2019-11-15T10:55:36+06:30June 21st, 2019|Tags: event management software, event management software in myanmar, event management system, event software, event software in myanmar|Comments Off on ဘာကြောင့် Event Management Software တွေကို ပိုမိုရွေးချယ် အသုံးပြုသင့်ပါသလဲ ?